Zvese nezve yekutanga eCommerce Musangano Live | ECommerce nhau
Monica sanchez | | Zviitiko
Une chitoro chepamhepo here kana uri kufunga kuchimisikidza? Iwe unofanirwa here kuwana mhinduro kubva kune nyanzvi kumibvunzo yako ine chekuita nebhizinesi rako? Kana iwe wapindura hongu kune chero yemibvunzo iyi, zvirokwazvo iwe unofarira chiitiko eCommerce Musangano Urarame.
Pakati pezuva rimwe iwe unozogona kudzidza nezve online bhizinesi, asi zvakare nezve kushambadzira. Chii chimwe, zvakasununguka chose.
1 Chii chinonzi eCommerce Musangano Urarame?
2 Ndeapi maspika anotora chikamu muchiitiko ichi?
3 Zvichaitika riini uye ndeipi chirongwa?
Chii chinonzi eCommerce Musangano Urarame?
Ndiyo yekutanga eCommerce chiitiko muKutenderera, mairi 12 vatauri vachataura newe nezvenzira yekugadzira bhizinesi repamhepo, manomano ekuichengetedza uye kubudirira, nei zvichikosha kuve neakanaka dhizaini yechitoro chepamhepo, zvekuita kukwezva vashanyi uye kuti vagone kuve vatengi, uye zvakawanda, zvakanyanya muzuva rinovimbisa kuve rakasarudzika uye rakakosha.
Nekuti isu tese tinoziva kuti kuve neinternet bhizinesi haufanire kuisa nguva nemari chete mune izvo zvatingati "zvakanakisa kumeso", izvo zvinosanganisira zita rezita uye dhizaini, asi iwe zvakare unofanirwa kuziva mashandiro zvinyorwa zvekuti ivo vanozvida kune vashanyi uye, nekudaro, zvakare kuGoogle.
Uye kana iwe uchikwanisawo kuwana mubairo, zvakanaka hei ... zvirinani, handiti? 🙂
Ndeapi maspika anotora chikamu muchiitiko ichi?
Sezvo ichave yakasarudzika, yaifanirwa kuve nekutora chikamu kwevanamazvikokota vechokwadi vasina kungove vari muchikamu kwenguva yakareba, asi zvakare vanoziva zvese zvakakosha kuti vazvikunde ... uye vazvigone pasina matambudziko. Nekudaro, ivo vane gumi nevaviri vatauri:
Joan Boluda: ndiani an Online Marketing chipangamazano, uye muridzi weboluda.com kosi portal.
Eva Lacalle: Inotarisira kushambadzira kwewebhu paPrestaShop.
Jordi Ordonez: ecommerce chipangamazano uye mudzidzisi.
Ismael ruiz: zvemukati wekushambadzira wezano.
Vivian Francos: iyo inotyaira iyo hashtag inoratidza chiitiko chako, brand, chigadzirwa kana sevhisi.
Maria Diaz: maneja wenyika doppler.
Marc cruells: SEO uye BlackHat nyanzvi.
JuanKa Diaz: Mberi-Mugumo mugadziri kusangano rekuvandudza jdevelopia.com.
Fernando Angulo nzvimbo yekuchengetedza mufananidzo: ndiani Musoro weInternational Partnerships paSemRush.
Carlos Chamber: CTO ye hepta.es, uye musimudziri wePrestaShop naJoomla!
Armando Salvador: PrestaShop mudzidzisi.
David ayala: Ndiye musiki wewebhu soywebmaster.com uye #seorosa.
Zvichaitika riini uye ndeipi chirongwa?
Unogona kuona chiitiko chiripo zuva rinotevera 12 of noviembre. Ichatanga na9: 30 mangwanani uye ichizopera na20: 30. Ehe saizvozvo, kuchave nekuzorora kwemasikati masikati.
Dzese hurukuro dziri kuvimbisa, asi kana tichifanirwa kukurudzira vamwe, angave aJoan Boluda na10 o'clock, naJuanKa Díaz na17. Nevaviri ava muchakwanisa kunatsiridza eCommerce yenyu zvakanyanya. Chero rubatsiro runogamuchirwa
Kana iwe uchida kusaina click here uye tora mukana kudzidza kubva kune akanakisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Zviitiko » eCommerce Musangano Live, chiitiko chausingakwanise kupotsa